Myanmar Computer Professionals Associations
Search Call for Proposals 2013 Developer Conference ( DevCon-Yangon 2013) November 23rd - 24th, 2013 ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး အသင်း website မှ Form များ ကို download ရယူနိုင်
Submitted by zwintun on Mon, 06/17/2013 - 23:27 The 3rd Developer Conference in Myanmar will be held on November 23rd – 24th, 2013 at the MICT Park, Hlaing University Campus, Yangon, Myanmar.
Read more about Call for Proposals 2013 Developer Conference ( DevCon-Yangon 2013) November 23rd - 24th, 2013 ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး အသင်း website မှ Form များ ကို download ရယူနိုင်
ITPEC စာမေးပွဲများအတွက် Question Formulation Meeting (QFM- Jun 2013) ကို မလေးရှား နိုင်ငံ Selangor မြို့တွင် တက်ရောက်ခဲ.
Submitted by zwintun on Mon, 06/17/2013 - 22:55 ITPEC စာမေးပွဲများအတွက် Question Formulation Meeting (QFM- Jun 2013) ကို မလေးရှား နိုင်ငံ Selangor မြို့တွင် ဇွန်လ လ (၁၂) ရက်မှ (၁၅) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၊ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းခိုင် နှင့် အလုပ်အမှုဆောင် ပြန်ကြားရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဝင်းထွန်းတို့မှ Exam ရေးရာကိစ္စရပ်များကို တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
Read more about ITPEC စာမေးပွဲများအတွက် Question Formulation Meeting (QFM- Jun 2013) ကို မလေးရှား နိုင်ငံ Selangor မြို့တွင် တက်ရောက်ခဲ.
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲ Certified Network Associate Exam ကျင်းပခဲ.
Submitted by zwintun on Sun, 06/16/2013 - 12:52 မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲ Certified Network Associate Exam ကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၆) ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက် (၉းဝဝ မှ ၁၂းဝဝ) နာရီ အထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ MICT Park (Room-205) တွင်လည်းကောင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းတို့တွင် တပြိုင်နက် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုစာမေးပွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းမှ ဖြေဆိုသူဦးရေ စုစုပေါင်း ( ၆၁ ) ဦး၊ မန္တလေးတိုင်းမှ (၃) ဦး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းမှ (၁၉) ဦး၊ ရှမ်းပြည်နယ်မှ (၁) ဦး စုစုပေါင်း ဖြေဆိုသူ (၈၄) ဦး ဖြေဆိုခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာ
Read more about မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲ Certified Network Associate Exam ကျင်းပခဲ.
“Advance J2EE and Enterprise Framework” သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Submitted by zwintun on Fri, 06/07/2013 - 17:09 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှကြီးမှူး၍ Advance J2EE and Framework နည်းပညာရပ်များကိုစိတ်ဝင်စားသော မြန်မာလူငယ်များအတွက် Advance J2EE and Enterprise Framework သင်တန်းတစ်ခုကိုဇွန်လ (၂၂) ရက်နေ့ ၂၀၁၃ ခုနစ် ၌ စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Read more about “Advance J2EE and Enterprise Framework” သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
ASOCIO Mid Year Plenary Meeting 2013 ကျင်းပခဲ.
Submitted by zwintun on Fri, 05/10/2013 - 19:48 Read more about ASOCIO Mid Year Plenary Meeting 2013 ကျင်းပခဲ.
MCPA Certified Network Associate (NA) Exam Preparation ( Intensive Course ) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Submitted by zwintun on Tue, 05/07/2013 - 13:14 မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၆) ရက်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစာမေးပွဲများသည် Professional နယ်ပါယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်ရန်အတွက် အဓိကလိုအပ်သော အသိပညာများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ဦးတည်စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲဖြစ်သည်နှင့်အညီ စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများသည် ပညာရှင်နယ်ပယ်တွင် စတင်လုပ်ကိုင်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
MCPA Certified Network Associate (NA) စာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများ တိုးတက်လာစေရန်နှင့် Networking ဆိုင်ရာ အခြေခံဗဟုသုတမျုား ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ သင်ကြားဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Read more about MCPA Certified Network Associate (NA) Exam Preparation ( Intensive Course ) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Submitted by zwintun on Tue, 05/07/2013 - 13:13 မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အသိအမှတ်ပြု Network စာမေးပွဲကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းနှင့် အသင်းခွဲများရှိရာ မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် တပြိုင်နက် ကျင်းပစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ စာမေးပွဲ များမှာ အိုင်တီပညာရှင်များအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလိုသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၊ အသင်းဝင်များအတွက် အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြုခံနိုင်ရေးအတွက် ဦးတည်စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲများဖြစ်သည်။ Read more about မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲကျင်းပမည်
MCF မှ ကြီးမှုး၍ Seminar on IT Leading-Edge Business and Technology Solution" ခေါင်းစဉ် ဖြင်. Korea Institute of Science and Technology မှ Dr. Kyu Hwan Lee က ဟောပြောဆွေးနွေးမည် Submitted by zwintun on Wed, 05/01/2013 - 16:46 Speaker : Dr. Kyu Hwan Lee
Time: 1:30 pm - 5:15 pm
Venue: Room 205, Main Building, MICT Park
Read more about MCF မှ ကြီးမှုး၍ Seminar on IT Leading-Edge Business and Technology Solution" ခေါင်းစဉ် ဖြင်. Korea Institute of Science and Technology မှ Dr. Kyu Hwan Lee က ဟောပြောဆွေးနွေးမည် ITPEC Examination (FE) အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်
Submitted by zwintun on Tue, 04/16/2013 - 12:11 Read more about ITPEC Examination (FE) အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်
ITPEC Examination အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်
Submitted by zwintun on Tue, 04/16/2013 - 12:09 Read more about ITPEC Examination အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်
Myanmar Computer Professionals Associations Main menuHome
MCPA Monthly Newsletter
Hits - MCPA DIVISIONS
Copyright © 2013. Myanmar Computer Professionals Association. All rights reserverd. Powered by Information Matrix